Nagu saabsan - Qalabka Birta Civen (Shanghai) Co., Ltd.
CIVEN Metal waa shirkad ku takhasustay cilmi-baarista, horumarinta, wax-soo-saarka iyo qaybinta maaddooyinka birta ee dhammaadka ah. Saldhigyadeena wax -soo -saarka waxay ku yaalliin Shanghai, Jiangsu, Henan, Hubei iyo meelo kale. Tobannaan sano oo horumar joogto ah ka dib, waxaan inta badan soo saarnaa oo iibinnaa bireedka naxaasta ah, bireedka aluminiumka iyo biraha kale ee birta ah oo ah foornada, xariiqa iyo xaashida. Meheraddu waxay ku fidday waddammada waaweyn ee adduunka oo dhan, iyada oo macaamiishu ay daboolayaan milateriga, caafimaadka, dhismaha, baabuurta, tamarta, isgaarsiinta, awoodda korontada, qalabka elektaroonigga ah iyo hawada sare iyo meelo kale oo badan. Waxaan si buuxda uga faa'iidaysannaa faa'iidooyinka juqraafiyeedkeenna, waxaan dhexgelinnaa ilaha caalamiga ah waxaanan sahamineynaa suuqyada adduunka, waxaan ku dadaaleynaa inaan noqonno sumcad caan ku ah agabyada biraha adduunka oo aan siinno shirkado waaweyn oo caan ah alaabo iyo adeegyo tayo wanaagsan leh.
Waxaan leenahay qalabka wax -soo -saarka ugu sarreeya adduunka iyo khadadka isu -imaatinka, waxaanna qornay shaqaale aad u tiro badan oo xirfadlayaal iyo farsamo leh iyo koox maamul oo aad u fiican. Laga soo bilaabo xulashada maaddada, wax soo saarka, kormeerka tayada, baakadaha iyo gaadiidka, waxaan la jaanqaadnaa hababka iyo heerarka caalamiga ah. Waxaan kaloo leenahay kartida cilmi -baaris madax -bannaan iyo horumar, waxaanna u soo saari karnaa macaamiisha alaab bir ah oo la habeeyay. Intaa waxaa dheer, waxaan ku qalabaysannahay qalabka kormeerka iyo tijaabinta adduunka si loo hubiyo darajada iyo tayada alaabtayada. Alaabtayada ayaa gabi ahaanba beddeli karta badeecadaha la midka ah ee ka yimid Mareykanka iyo Japan, iyo waxqabadkeenna qiimaha ayaa aad uga wanaagsan badeecadaha la midka ah.
Iyada oo la adeegsanayo falsafadda ganacsiga ee "ka sarreynta nafteena iyo raadinta heer sare", waxaan sii wadi doonnaa inaan gaarno horumarro cusub oo ku saabsan maaddada birta iyadoo la dhexgelinayo faa'iidooyinka kheyraadka adduunka, waxaanan ku dadaali doonnaa inaan noqonno alaab -qeybiye tayo leh oo saameyn ku leh maaddada birta adduunka oo dhan.
Khadka Wax -soo -saarka
Waxaan leenahay khadka wax soosaarka RA & ED Copper Foil iyo xoogga xoogga leh ee R&D.
Waxaan si buuxda u qancin karnaa baahida macaamiisha dabaqadda dhexe iyo kuwa sare iyadoon loo eegin wax soo saar ama waxqabad.
Iyada oo leh asal dhaqaale oo xoog leh iyo faa'iidada kheyraadka ee shirkadda waalidka,
waxaan awoodnaa inaan si joogto ah u hagaajinno badeecadahayaga si aan ula qabsanno wax badan,
iyo tartanka suuqa oo aad u xanaaqsan.
Marka loo eego baahida macaamiisha, waxaan soo saari karnaa badeecado buuxiya shuruudaha macaamiisha. Waxaan leenahay khibrad wax-soo-saarka heerka koowaad iyo farsamada.
Warshadda Wax -soo -saarka Biraha
Mashiinka Waxsoosaarka Naxaasta ah
Qalabka Kormeerka Tayada